Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hanafika saka | Tontolo alika
Mety efa naheno olona nilaza ianao hoe "miray saina toa ny saka sy alika" izy, sa tsy izany? Ary io dia matetika no heverina fa samy hafa be ny biby roa ka tsy mifankahazo fotsiny. Fa ny tena izy dia tsy izany foana no izy. Raha ny tena izy, amin'ny faharetana kely dia azonao atao ny hahatonga azy ireo ho mpinamana be.
Faharetana izay tsy maintsy ananana koa raha te hisoroka ny alika tsy handratra anao. Ampahafantaro anay ny fomba hisorohana ny alikako tsy hanafika saka.
Isaky ny azo atao dia amporisihina mafy izany Hatramin'ny alika kely dia mifandray amin'ny saka ny alika. Amin'izay dia ho mora kokoa aminao ny hifanaraka amin'izy ireo ary, noho izany, tsy mahita azy ireo ho fahavalo, fa toy ny namana. Saingy mazava ho azy, indraindray dia tsy azo atao izany, na satria tsy miaina miaraka amin'ny totohondry isika na satria tsy mahafantatra olona manana. Ka inona no hatao amin'ireo tranga ireo?
Ny idealy dia, mazava ho azy, mba hialana amin'ny olana. Ho an'ity, horaisinay amin'ny alika ny alikantsika, ary tsy halefanay any amin'ireo faritra misy na mety misy saka izany, satria afaka mandre sy / na mamofona iray izy io na oviana na oviana ary manomboka ny fanenjehana. Raha mitranga izany dia mety ho sarotra amintsika ny hahita azy.
Ka raha voafatotra tsara amin'ny fehikibo, raha miseho tampoka dia tsy mila omentsika alika ilay alika, fa apetraho fotsiny eo alohan'ny orony fa tiany be ilay izy ary alaivo lavitra, mankany amin'ny faritra iray izay ahatsiarovany fahatoniana. Avy eo izahay dia hangataka "sit" na "hipetraka" anao ary hanome anao ny fitsaboana. Rehefa mahita saka hafa indray isika dia hanao toy izany koa. Rehefa mandeha ny fotoana dia avo ny vintana hahatonga azy ho mahazo aina amin'ny iray.
Mazava ho azy, aza adino izany ho tapa-kevitra ny fihetsikao amin'ity dingana iray manontolo ity. Raha mitebiteby na miady saina ianao, dia hahatsapa toy izany koa ny alika ary ny zavatra hataony dia te-hanafika fatratra raha azo atao. Alohan'ny handehanana mitsangatsangana dia manaova fofona lalina hankafizanao ny dia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hanafika saka